सकारात्मक स्वाभिमान निमार्ण कसरी गर्ने ? — Motivatenews.Com
सकारात्मक स्वाभिमान निमार्ण कसरी गर्ने ?
काठमाडौं – यदि तपाईँ छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक स्वाभिमान निमार्ण गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा छोटो के हुनसक्छ ? हामी केही काम यस्तो व्यक्तिका लागि गरौं जसले त्यसको बदलामा न त पैसाले चुकाउन सकोस न त अरु केही दिएर ।
केही बर्ष पहिले मैले जेलमा कैदिहरुलाई धारणा र स्वाभिमान सिकाउने कार्यक्रम सुरु गरे । त्यहाँ मैले बर्षैं सिकेको भन्दा धेरै कुरा केही हप्ता भित्रमै सिकेँ । मेरो कार्यक्रममा २ हप्तासम्म भाग लिएको एक कैदिले ‘सर म दुई हप्तापछि नै जेलबाट छुट्दै छु’ भनी सुनायो ।
मैले उसलाई धारण विकास गर्ने कार्यक्रमबाट के जानियो भनी सोधेँ । उसले केहीवेर सोची आफ्नो बारेमा आजकाल ऊ राम्रो महसुस गर्ने गरेको बतायो । मैले भने, ‘मलाई केही पनि राम्रो नसुनाउनुहोस्, बरु मुख्य रुपमा तपाईँको कुन व्यवहार परिर्वतन भयो त्यो सुनाउनुहोस् ।’ सिकेको कुराले जबसम्म व्यवहारमा परिर्वतन आउँदैन तबसम्म त्यो सिकेको केही काम लाग्दैन भन्ने मेरो व्श्विास छ ।
उसले मलाई कार्यक्रम सुरु भएकै दिनदेखि प्रत्यक्ष दिन बाइबल पढ्न थालेको सुनायो । तपाईले बाइबल पढेर के प्राप्त गर्नु भयो भनी मैले सोधें । आफू र अरु प्रति सहज अनुभव हुन थालेको छ, पहिला त्यस्तो हुँदैनथ्यो भनी उसले भन्यो । मैले उसलाई भनेँ, ‘त्यो राम्रो हो तर जेल छोडेपछि के गर्नुहुन्छ, त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।’
उ समाजमा योगदान किनसक्ने बन्न कोसिस गर्नेछु भनी उसले मलाई सुनायो । उसलाई मैले त्यही प्रश्न पुनः दोहोर्याएर सोधें र उसले बारम्बार त्यही उत्तर दियो । त्यसपछि मैले फेरी उसलाई सोधें तपाईँ के गरिरहनु भएको छ ? जब उसले रिसाएर उत्तर दियो, ‘म समाजको योगदानदायक सदस्य बन्न गइरहेको छु ।’
उसले अगाडी दिएको उत्तर र अहिले दिएको उत्तरमा निकै भिन्नता रहेको कुरा मैले उसलाइै सम्झाएँ । सुरुमा उसले म कोसिस गर्ने छु भन्यो पछि उसले बन्ने छु भन्यो । हामी केही काम गछौँ कि त गर्दैनौं । कोसिस शब्दले उसलाई जेल फर्किने ढोका खुल्लै छोड्छ ।
यो वार्तालाभ सुनिरहेको अर्को कैदिले सोध्यो, ‘तपाईले यस कामबाट कति फैसा पाउनु हुन्छ ?’ यहाँबाट पाउने पैसा भन्दा मैले महसुस गरेको अनुभव नै मेरो लागि बढी महत्वपूर्ण छ भनी मैले भनें । उसले फेरी सोध्यो, ‘उसो भए तपाईँ किन आउनु भएको ?’
मैले भने, ‘म यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न आएको हुँ । मेरो स्वार्थ यो संसारलाई बस्नको लागि सुन्दर स्थान बनाउनु हो । यस्तो खालको स्वार्थता सुन्दर हुन्छ । संक्षपमा भन्दा तपाईँ समाजलाई जे दिनुहुन्छ, त्यसको बदलामा जहिले पनि त्यही नै पाउनु हुन्छ । धेरै जसो तपाईले दिएभन्दा धेरै पाउनुहुन्छ । तर तपाईँ समाजलाई केही दिदा केही पाउने आश नगर्नुहोस् ।’
२०७७ असार १० गते प्रकाशित